Darpan Nepal – मुस्लिम देशको नोटमा किन राखियो गणेशको फोटो ?
राजेश पायल राईले सुनाए बाल्यकालको अनुभव, ९ कक्षामा पढ्दा पहिलो गीत रेकर्ड गराए (भिडियो सहित)
साँहिलाले र साँहिलीलाई भगायो (हेर्नुहोस् भिडियो)
मरिच प्रयोग गर्नाले हुने फाइदाहरु:
फिल्म ‘जय श्री दाम’ प्रदर्शनको तयारीमा
कसरी घटाउन सकिन्छ पेटकाे बाेसाे ?
घाउको हेरविचार गर्ने तरिका
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालद्धारा दरोघर निर्माणका वारेमा रेडियोकर्मीहरुलाई तालिम
मुस्लिम देशको नोटमा किन राखियो गणेशको फोटो ?
Apr 17, 2018Pasang TamangIntresting fact0Like
प्राय हामी विश्वका अलग-अलग देशको रोचक तथ्य सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । तर केही कुरा यस्ता हुन्छन् जुन भावनासँग जोडिन्छन् । यस्तै एक देश हो इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियालाई विश्वकै सबैभन्दा धेरै मुस्लिम आबादी भएको देश भनेर चिनिन्छ ।
यहाँको मुद्रालाई नेपालसँग मिल्दोजुल्दो लाग्ने ‘रुपियाह’ भनिन्छ । त्यसबाहेक अझै रोचक कुरा त के छ भने मुस्लिम देश इन्डोनेसियाको मुद्रामा हिन्दू धर्म र नेपालमा पुजनीय गणेशको तस्वीर छापिएको छ । आखिर किन होला ? यसको कारण पनि रोचक छ ।
इन्डोनेसियामा करिब ८७ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्याले इस्लाम धर्म मान्दछन् । हिन्दूहरु केबल ३ प्रतिशत छन् । रुपियाह भनिने इन्डोनेसियाको २० हजारको नोटमा भगवान गणेशको फोटो छ । त्यहाँका बासिन्दाले गणेशकै कारण देशको अर्थव्यवस्था मजबूत भएको विश्वास गर्ने भएकाले नोटमा गणेशको फोटो छापिएको बताइन्छ ।
भगवान गणेशलाई इन्डोनेसियामा शिक्षा, कला र विज्ञानको देवता मानिन्छ । २० हजारको नोटको अघिल्तिर गणेशको र पछिल्लो भागमा कक्षा कोठाको तस्वीर छ, जसमा शिक्षक र विद्यार्थी देखिन्छन् ।
साथै नोटमा इन्डोनेसियाको पहिलो शिक्षामन्त्री हजर देवान्त्राको तस्वीर पनि छ । देवान्त्रालाई इन्डोनेसियाको स्वतन्त्रता सेनानी मानिन्छ ।
भनिन्छ केही वर्ष अघि इन्डोनेसियामा आर्थिक मन्दी आयो । त्यहाँका अर्थविज्ञहरुले निकै बहस र छलफलपछि २० हजारको एउटा नोट जारी गरे, जसमा गणेशको तस्वीर छापियो । त्यहाँका बासिन्दाहरुमा यो मान्यता छ कि त्यसपछि अर्थव्यवस्था मजबुत बन्यो ।
नोटमा गणेशको मात्रै होइन इन्डोनेसियन आर्मीको मस्कटमा हनुमान पनि राखिएको छ । र, एक चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यमा अर्जुन र श्रीकृष्णको मूर्ति पनि राखिएको छ ।
Previous Postसाढे ४ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर Next Postयस्ता छन् चीनले दिएका विमान, तत्काल तराई क्षेत्रमा उडाउने तयारी
आज मङ्गलबार भद्रकाली माँतालाई एक शेयर गर्दै राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।
चलचित्रमा एकदमै रुचायिएको दयाहाङ राई र दिया पुनको...
ट्राफिकले स्वस्तिमाको लाइसेन्स लगेपछि… (भिडियो)
Admin123Dec 16, 2018Like
फिल्म ‘हजार जुनी सम्म’ शुभमुहुर्त
फिल्म आरोपको दोश्रो गीत ‘ए मन’ सार्वजनिक
EntertainmentIntresting factMusic vedioNews
क्षितिज मेन्याङबो र राम कुमार राईको सहकार्यमा रहेको “तिमी त थियौ”सार्वजनिक
यी खाने कुरा कहिल्यै खाली पेटमा खान हुँदैन !
नाचेर अरुलाई मनोरञ्जन दिने सन्तोषका दुईवटै मृगैला फेल भएपछि....सकेसम्म आर्थीक सहयोग नसके यो पोष्ट सेयर गरेर सहयोग गर्दिनुहोला
ठूले र ठूलीको माया प्रेमलाई बुनेर बनेको एउटा हेर्नै पर्ने मिठो गित भिडीयो सहित
धर्म निरपेक्ष भित्र लादिएको हिन्दुवाद!